R/wasaare Gaas oo kulamo kala duwan la yeeshay R/wasaraha Ethiopia iyo M/weynaha dawlada deegaanka Soomaalida. – Radio Daljir
R/wasaare Gaas oo kulamo kala duwan la yeeshay R/wasaraha Ethiopia iyo M/weynaha dawlada deegaanka Soomaalida.
Addis-ababa, Oct 08 – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa waxaa xalay casho sharaf u sameeyey Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka Ethiopia, Xildhibaan ka tirsan Federaalka, Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Ethiopia, Ku xigeenkiisa, ganacsato soomaaliyeed iyo diplomaasiyiin.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali oo ka hadlayey munaasabadda cashada ayaa aad uga mahadceliyey Wasiirka Ganacisga Dowladda Ethiopia, Wasiiru Dowlayaasha Maaliyadda iyo Arrimaha Bulshada iyo Dalxiiska, xildhibaan Gorfaa Gaarane, Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Ethiopia, Ku-xigeenkiisa iyo ganacsatada Soomaaliyeed sida quruxda badan ee ay ugu soo dhoweeyeen Addis Ababa iyo casho sharafta ay u sameeyeen.
Kulankan casho sharafta ayaa waxaa ka hadlay Wasiirka Ganacsiga Dowladda Federalka Ethiopia Abdirahman Gurey, Madaxweynaha Dowladda Deegaanka Soomaalida Abdi Mohamud Omar, ganacsade Soomaaliyeed. Ugu danbeyntii xafladda cashada waxaa lagu sharfay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo soo gabogabeeyey.
Ra’iisul Wasaaraha waxuu u ballanqaaday Dowladda Federaalka iyo Dowladda Deegaanka Soomalida inay ka wada shaqeeyaan sidii geeska Afrika u noqon lahaa goob nabad ah oo ganacsiga iyo dhaqaalahaba loo wada horumarin lahaa. Sidoo kale xafladdan waxaa goob joog ka ahaa Safiirada labada Dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia, Saciid iyo Abdiaziz.
Dhinaca kale shalay R/wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali waxaa uu kulan dheer la qaatay dhigiisa Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Melez Zenawi. Labada Ra’iisul Wasaare ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia, arrimaha amniga, abaaraha iyo xaaladda dalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Melez Zenawi ayaa ugu horreyntii u tacsiyeeyey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed falkii lagu laayey dadkii Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan oo ay u badnaayeen arday iyo waalidiintooda, falkaas oo ka dhacay Muqdisho 4 October. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali ayaa u mahadceliyey dhigiiisa Melez Zanawi sida quruxda badan ee loogu soo dhoweeyey dalka Ethiopia gaar ahaan magaalo madaxda Addis Ababa.
Labada Ra’iisul Wasaare oo waqti dheer isla qaatay una wada hadlay si saraaxad ah ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo ay ugu muhiimsanaayeen Amniga, Abaaraha iyo sidii Dowladda Soomaaliyeed looga saacidi lahaa dhaqangelinta Roadmap kii ay Soomaalidu wada saxiixdeen 6dii September. Labada mas’uul ayaa sheegay in horumarka laga sameeyey amniga, siyaasadda iyo dib-u-heshiisiinta loo baahanyahay in horey loo sii wado. Sidoo kale labada Ra’iisul Wasaare ayaa isla gartay in laga wada shaqeeyo dhanka amniga iyo abaaraha oo shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo gar-gaarka bani’aadanimo.
Waa markii ugu horreysey ee uu Ra’iisul Wasaare Prof Abdiweli Mohamed Ali soo gaaro Addis Ababa tan iyo intii uu la wareegey xilka Ra’iisul Wasaarenimo ee Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la hadlayey wariyeyaasha Ethiopia ka dib kulankii labada Ra’iisul Wasaare ayaa wuxuu saxaafadda u sheegay in kulankoodii uu ahaa mid guul iyo is-afgarad ku dhamaaday, isla markaana looga wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa amniga geeska Afrika iyo sidoo kale arrimaha abaaraha. Ra’iisul Wasaare Abdiweli ayaa sheegay in falkii waxashnimada ahaa ee Al-Shabaab ku dileen ardaydii Soomaaliyeed inuusan niyad jab u keeneynin dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in la sii xoojinayo dadaalada kooxaha Al-Shabaab looga sifeynayo dalka Soomaaliya.